I-Realme GT Neo2, enye indlela enamandla kuluhlu oluphakathi | Iindaba zeGajethi
I-Realme GT Neo2, enye indlela enamandla kuluhlu oluphakathi
UMiguel Hernandez | 16/11/2021 13:00 | Iiselfowuni, Umnxeba
Sikuzisa kwakhona imveliso yophawu oluthembekileyo kwixabiso lemali esandula kufika eSpain ukuze umelane nokumkanikazi wexabiso eliphantsi, uXiaomi. Sithetha njengoko bekungenakwenzeka ngenye indlela malunga neRelame, ifemu egcina ikhathalogu yokuqaliswa ezele ziindaba ngaphandle kwengxaki ekhoyo yeesemiconductors kunye nezinye iimveliso.
Sibonisa iRealme GT Neo2 entsha, uphehlelelo lwamva nje lwenkampani esiyihlalutye nzulu kwaye savavanywa ukuze ubone ukuba iya kuphawula ngokwenene na ngaphambili nasemva kuluhlu oluphakathi.
1 Uyilo kunye nemathiriyeli: Enye yekalika kunye nesanti enye
3 Multimedia kunye noqhagamshelwano
4 Icandelo leefoto, ukuphoxeka okukhulu
Uyilo kunye nemathiriyeli: Enye yekalika kunye nesanti enye
Ngokumalunga noku, masithi iRealme iyaqhubeka kwindlela yayo esele isekiwe, I-GT Neo2 ibheja ngasemva ifana kakhulu neyangaphambili nangona inika umbono wokuba yenziwe ngeglasi kwesi sihlandlo, ekukhokeleli ekutshajisweni ngaphandle kwamacingo, ikakhulu ngenxa yokuba imiphetho yesixhobo yenziwe ngeplastiki njengoko bekuqhelekile kwi-brand ukuza kuthi ga ngoku. Kummandla ongaphambili sinepaneli entsha ye-6,6-intshi enemiphetho emxinwa kakhulu, kodwa ukude noko ezinye iindidi zemveliso zibonelela, ngakumbi kuthathelwa ingqalelo i-asymmetry phakathi kwephezulu nangaphantsi.
Imibala: Bright blue, GT eluhlaza kunye nomnyama.
Ngoku imiphetho ethambileyo, i-USB-C ithotywe phantsi, ngaphandle kwe-3,5mm Jack ngeli xesha, ngelixa sineqhosha "lamandla" kwicala lasekunene kunye namaqhosha evolumu ngasekhohlo. Konke oku ukusinika imilinganiselo ye-162,9 x 75,8 x 8,6 mm kunye nobunzima obupheleleyo obuya kuchukumisa i-200 grams, Ayikhaphuki ngokucinga ukuba yenziwe ngeplastiki, sicinga ukuba ubungakanani bebhetri buya kuba ninzi ukwenza oku. Ngaphandle koko, isixhobo esigqitywe kakuhle esinomdla wombala wombala.
Siqala ngamanqaku athandwayo eRealme, inyani yokubheja kwi IQualcomm Snapdragon 870 Inika umqondiso olungileyo wokuba akufuneki utsibe amandla, ukuyilawula sinenkqubo yeRealme yokuphelisa ubushushu ezibonelelo zayo sele zibonakalisiwe ziinguqulelo ezininzi zezixhobo ezibuyileyo. Kwinqanaba lomzobo, likhatshwa yi I-Adreno 650 yomthamo owaziwayo, kunye I-8 okanye i-12 GB ye-LPDDR5 RAM kuxhomekeke kwisixhobo esigqibe ukusithenga. Isampulu yovavanyo yolu hlaziyo yi-8GB ye-RAM.
Ibhetri esibonelele ngaphezu kosuku olupheleleyo lokusebenzisa.
Sineendlela ezimbini zokugcina, I-128 GB kunye ne-256 GB ngokulandelelanayo kunye ne-UFS 3.1 iteknoloji yokusebenza kwayo kungaphezu kobungqina bokuba yeyona ndlela yokugcina yokugcina izixhobo ze-Android. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into ilungile njengoko unokubona, sinenkumbulo enhle, i-hardware enamandla kunye nezithembiso ezininzi, siya kubona ukuba yeyiphi yazo ezalisekileyo kwaye engekho. Inyani yeyokuba isixhobo sihamba kancinci ngayo yonke into esiyibeka phambi kwaso, sibeka umaleko wobuntu, I-Realme UI 2.0 eqhubeka nokutsala uthotho lwe-bloatware esingayiqondi ncam kwisixhobo esinezi mpawu, nangona kunjalo, sinokuyisusa ngokulula okukhulu.
Multimedia kunye noqhagamshelwano
Isikrini sayo se-6,6-intshi ye-AMOLED sigqamile, sinesisombululo esipheleleyo seHD + kunye nezinga lokuhlaziya elingekho ngaphantsi kwe-120 Hz (i-600 Hz kwimeko yokuvuselela i-touch). Oku kusinika i-20: ifomathi ye-9 ukuqaqamba okulungileyo (ukuya kuthi ga kwi-1.300 nits kwincopho ephezulu) kunye nohlengahlengiso olulungileyo lombala. Ngaphandle kwamathandabuzo, isikrini sibonakala kum njengeyona nto ibalaseleyo kule Realme GT Neo2. Ngokucacileyo siyahambelana ne-HDR10 +, iDolby Vision kwaye ekugqibeleni iDolby Atmos ngokusebenzisa izithethi zayo "ze-stereo", sibeka amanqaku okucaphula kuba esezantsi inomthamo obonakalayo omkhulu kuneyangaphambili.
Ngokumalunga noqhagamshelo, nangona sisithi ndlela ntle kwi-3,5 mm Jack, Uphawu lophawu (mhlawumbi isizathu sokuba bafake ezinye iiBuds Air 2 kwipakethi yeendaba). Ngokucacileyo sinonxibelelwano IYIMBINI kwidatha yeselula, efikelela kumphakamo wezantya 5G njengoko kulindelekile, zonke zikhatshwa ngu Bluetooth 5.2 kwaye okona kubaluleke kakhulu, nathi siyayonwabela WiFi 6 leyo kwiimvavanyo zam ibonelele ngesantya esiphezulu, ukusebenza kakuhle kunye nokuzinza. Ekugqibeleni khapha I-GPS kunye ne-NFC ingenzeka njani ngenye indlela.
Icandelo leefoto, ukuphoxeka okukhulu
Iikhamera zeRealme zisekude kukhuphiswano, njengoko zibeka izinzwa ezilinganisa ukuba zinkulu (kunye neefreyimu ezimnyama ezichazwe kakhulu), zikude kugqweso olunikezwa kukusebenza kwesoftware ngokubanzi. Oku kuxa ukhumbula ukuba ujongene nesixhobo soluhlu oluphakathi. Sinenzwa ephambili ekhusela kakuhle kwiimeko zokukhanya ezifanelekileyo, ezihlupheka ngokungafaniyo, kodwa zizinzisa ividiyo kakuhle. I-Wide Angle inobunzima obaziwayo ekukhanyeni okuphantsi kunye nokwahluka kokukhanya, iMacro sisongezo esinganiki nto ngokupheleleyo kumava.
Okuphambili: 64 MP f / 1.8
I-engile ebanzi: 8MP f / 2.3 119º FOV
Ubukhulu: 2MP f / 2.4
Sinekhamera ye-16 MP Selfie (f / 2.5) enendlela yobuhle obungenelelayo kodwa, ngokungafaniyo nezingasemva, inika iziphumo ezilungileyo ngaphakathi koko kulindelekileyo. Imowudi ye-portrait, nokuba yeyiphi na ikhamera esetyenzisiweyo, ine-software ephazamisayo ngokugqithisileyo kwaye iyakwazi ukuthabatha ukukhanya okuncinci kakhulu kunokuba bekulindelwe, ngoko ukusetyenziswa kwayo akukhuthazwa. Kunomdla wokuba eyona nto imangalisayo yividiyo enenkqubo yeArtificial Intelligence yokuzinzisa, into endiyifumene ikumgangatho ophezulu.
Logama nje icandelo lemifanekiso lingeyomfuneko kakhulu kuwe (kule meko ndikumemela kwisiphelo esiphezulu) le Realme GT Neo2 ibonelela ngomsebenzi olungileyo enkosi kwiphaneli yayo ye-AMOLED enezinga eliphezulu lokuhlaziya, imemori ye-UFS 3.1 kunye neprosesa eyaziwayo. , i-Snapdragon 870. Kuwo onke amacandelo ayimi, kwaye ayizenzi ngathi, into ethile i-terminal eqala kumaxabiso alandelayo:
UMNIKELO WANGOLWESIHLANU OMNYAMA (ukususela ngoNovemba 16 ukuya kuNovemba 29, 2021): € 369,99 (8GB + 128GB) € 449,99 (12GB + 256GB).
Iyafumaneka kwivenkile ye-intanethi ye-realme kunye nabasasazi abasemthethweni abanje ngeAmazon, Aliexpress okanye iPcComponentes phakathi kwabanye.
I-Realme GT Neo2
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 16 ukusuka kwi2021
Utshintsho lokugqibela: NgoNovemba 13 ukusuka kwi2021
Amandla amakhulu kunye nenkumbulo elungileyo
Ixabiso elihlengahlengisiweyo kwintengiso
Isikrini esihle kwiisetingi kunye nokuhlaziya
Izakhelo ezichazwe kakhulu
Baqhubeka bebheja ngeplastiki
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-Realme GT Neo2, enye indlela enamandla kuluhlu oluphakathi
I-Samsung QLED 4K 2021 TV nge-32% isaphulelo (ugcina i-€ 276)